Ezabo banokuba ngabafunda isidanga sokuqala (prospective undergraduates) -Electrical and Electronic Engineering | Stellenbosch University
Home › Ezabo banokuba ngabafunda isidanga sokuqala (prospective undergraduates)
Kutheni ungafunda apha?
Zeziphi izinto endinokukhetha kuzo?
Ndisenza njani isicelo?
Ikhampasi yethu ayigqwesanga nje ngobuhle kuphela, koko ukufunda kwisebe lethu kungakukhokelela kumathuba omsebenzi ahluka-hlukeneyo amaninzi nanenzuzo, futhi abafundi bethu abanezidanga babangwa phantse kuwo onke amacandelo ezoqoqosho. Isebe lethu liphumelele iimbasa ezininzi zamazwe ngamazwe kwaye livelise iinjineli ezidume ehlabathini.
Ubungqina benkonzo yethu yodidi ebalaseleyo sisantya ezithi iiNjineli zethu ziphangwe ngazo yimarike yabasebenzi. Ngamanye amazwi, iiNjineli zethu ezithweswe isidanga kwezombane ne-elekthroniki zidla ngokufumana umsebenzi ( okanye singathi baphendula ubizo lwabo?) phambi kokutsho umthetho Ohm.
Inkqubo ye-BEng kubuNjineli boMbane ne-Elekthroniki iya kuxhobisa ngesiseko solwazi oluninzi seentlobo zamathuba omsebenzi. Iminyaka yesithathu neyokugqibela yakhiwe ngaphezu kwesiseko seenzululwazi zemathematika nezobunjineli ezisekwe kwiminyaka emibini yokuqala, ngeeaplikheyishini zobunjineli kwifildi yamandla ombane, iielekthroniki, iisistim zikazibuthe wombane, iisistim zekhompyutha, iisistim zolawulo nokwenziwa kwemiqondiso.
Inkqubo iqinisekiswe liBhunga leeNjineli zaseMzantsi Africa (i-ECSA), eliya kwenza ukuba abathweswe izidanga babhaliswe njengeeNjineli zobuNgcali. I-Washington Accord nayo ikwaqinisekisa ngokwamkeleka kumazwe ngamazwe kweziqinisekiso zemfundo zobunjineli zeYunivesithi yaseStellenbosch. Ngoko ke, isidanga esisinikezayo samkeleke kumazwe ngamazwe. Ngaphezu koko, uninzi lwabafundi bethu bangena kwimarike yabasebenzi bamazwe ngamazwe kwaye bayagqwesa kwiinkampani zeentlanga ezininzi.
INkqubo yokuXhasa ezeMfundo esebenzisanayo iyafumaneka kubafundi abasuka kumakhaya angathathi-ntweni.
ISebe linikeza ngenye inkqubo yesidanga seminyaka emine se-Bachelor seminyaka emine kubuNjineli boMbane ne-Elekthroniki, kunye namasetyana amane obuchule. Ezi zezeInfomatiki, aMandla ombane, ezeRobhothi, kunye nezoQhagamshelwano ngefowuni. Ubuchule buqalisa kwisimesta yesibini yonyaka wesithathu wesifundo.
Eli setyana ligxile kwinzululwazi yekhompyutha yenqanaba eliphezulu nakwiisistim zesoftwe (njengoqhagamshelwano lweintanethi, ugcino lwevishuwali, njl), kodwa likwanika umfundi isiseko esilungileyo kwiikhompyutha nakwidatha, kwaye liquka uyilo kwihadiwe nakwisoftwe kuzo zombini iilwimi zenqanaba eliphezulu neliphantsi. Abafundi abalandela eli setyana babhaliselwa iimodyuli ezintathu zonyaka wokugqibela wesine kwisidanga se-BSc kubuNzululwazi beKhompyutha kwiminyaka yabo yokugqibela emibini.
Kwisetyana lezaMandla ombane, abafundi bafunda malunga neemoto zombane, ukuphehlwa kwamandla ombane, amandla ahlaziywa ngokutsha, ulawulo lwamandla kwakunye nolawulo lwamandla alawulwa ngekhompyutha.
Isetyana lezeRobhothi ligxile kwinkalo apho oomekhanikhi badibana nee-elekthroniki, kwaye liquka ukuyilwa kweenqwelo zeerobhothi, iinqwelo-mafutha ezizihambelayo kwakunye neesathelayithi. Isebe kudala lizibandakanye ngokubanzi nokuphuhliswa kweesathelayithi ezakhiwa apha eMzantsi Afrika, kwaye liyinkokheli kwifildi yobunjineli besathelayithi.
Ihlabathi lethu lizele zizixhobo zoqhagamshelwano ezinjengeeselfowuni, iirediyo kunye nezamkeli zikamabona-kude neesistim ze-GPS. Imiqondiso yemayikhroweyivu ilungiswe ngemijelo yolwazi e-enkhowudiweyo, isasaza izehlo zezemidlalo ehlabathini lonke ngeentwana zomzuzwana, zisenza sikwazi ukuzibukela kubumfuma-mfuma bamakhaya ethu. Oku kwenzeka ngenxa yethiyori yezoqhagamshelwano. Eli setyana lesifundo ligxile ngokukodwa kulwazi olungee-elekthroniki, izixhobo zefrikhwensi ephezulu kwanokusasazwa kwedatha edingekayo yokungena kule fildi ibanzi engaphakathi kobuNjineli be-E&amp.
Ngolwazi oluninzi ngesakhiwo sesifundo kwakunye neenkcazelo zeemodyuli ezizimeleyo, nceda ubone incwadi yoNyaka yakutsha nje yeFakhalthi yobuNjineli.
Kunyaka wokuqala, bonke abafundi bezobuNjineli balandela izifundo ezifanayo ukuze bafumane izakhono ezifanelekileyo zemathematika nezobunzululwazi. Ukusukela kunyaka wesibini ukuya phambili, isiqulatho esisulungekileyo semathematika siyaqalisa ukuvulela indlela iimodyuli zesifundo sobunjineli apho imathematiki isentyenziswa kwiingxaki zobunjineli kwaye ngamanye amaxesha ziphuhliswa ngokwandileyo, njengoko kufunekayo. Ngoko ke kunyaka wesibini, izifundo ezahlukeneyo zezidanga zobunjineli ziyaqalisa ukuphambuka.
Kude kube sekupheleni kwesimesta yokuqala yonyaka wesithathu, bonke abafundi bobuNjineli be-E&E balandela isethi efanayo yeemodyuli. Oku kunikeza abafundi isiseko esibanzi esipheleleyo esiya kubenza babe nako ukuya nakweliphi na icala lemarike yomsebenzi wobunjineli bombane nobekhompyutha.
Ekuqaleni kwesimesta yesibini yonyaka wesithathu, abafundi bangaqalisa ukulandela elinye kula masetyana mane obuchule. Njengoko abafundi kwesi sigaba sele benolwazi olubalulekileyo lwezifundo zoqeqesho ezahlukileyo kubuNjineli be-E&E, banako ukwenza olusengqondweni malunga nenkqubo iyonke.
Amasetyana amane ayaqhubekeka kunyaka wesine nowokugqibela, kwaye umfundi ngamnye ugqiba inkqubo yakhe yemfundo ngeprojekthi yonyaka wokugqibela. Isahlulo esibalulekileyo sonyaka wokugqibela wesifundo sabelwa kule projekthi, eyincopho yeminyaka emine yesifundo.
Inkqubo ayizixakekisi ngemibandela yobunjineli bezemathematika nobobugcisa kuphela, koko nezakhono zolawulo lobunjineli, kunye nabo bonke abafundi bonyaka wokugqibela abathatha imodyuli kuburhwebi (i-entrepreneurship).
Kufaneke uhlangabezane neemfuneko ezithile ezincinci ukuze uthathwe kule nkqubo, njengoko zithiwe thaca kwincwadi yoNyaka yakutsha nje yeFakhalthi yobuNjineli. Ukuba uyahlangabezana nezi mfuneko, ungasenza apha isicelo apha isicelo.